Aged Shelf Kambani, Corporation uye LLC Mari dzekuvandudza
Mari yekuvandudza yemakambani akwegura, maAdvs, uye mamwe marudzi ekambani.
Gore rega rega iyo mubatanidzwa, LLC kana yakafanana kambani mhando inowana mari yegore yekuvandudza. Mari zhinji dzegore rose dzekambani yeUS dzinofanirwa nezuva rekupedzisira remwedzi umo kambani yakatanga kuiswa. Semuenzaniso, ngatitii kambani yakamisikidzwa muNevada munaKurume 15. Mari yekuvandudza yegore rose inotibhadharira neMarch 31 yegore rega. Kana mari yekuvandudza isina kubhadharwa nezuva rakatarwa hurumende inoongorora chirango. Nyika dzakasiyana uye nyika dzakasiyana maererano nehurongwa hwekuvandudza uye huwandu hwakakodzera.
Semuenzaniso, munyika yeBelize, zvisinei nemusi wekubatanidzwa, mari yegore yekuchengetedza inofanirwa musi waApril 30th wegore rinotevera. MuAnguilla, mari yekuvandudza inokodzera zvichienderana nehurongwa hwekota.
Unotevera muenzaniso wepurogiramu yekuvandudza yeAnguilla:
Anguilla Kambani yekuvandudza fizi inokodzera pane purogiramu zvichienderana nemazuva avo ekubatanidzwa. Pasi pemutemo weIBC, mari yekuvandudza yegore negore inobhadharwa pasati pangopera zuva rekupedzisira rekota yekota iyo iyo IBC yakatanga kuiswa. Nekudaro, kana kambani yaive yakaverengerwa musi wa1 Nyamavhuvhu, kambani inofanirwa kubhadhara mari yayo yegore yekuvandudza pasati papfuura 30th yaGunyana wegore rinotevera.
Zuva rekupedzisira rekota yega yega ndi: Kurume 31, Chikumi 30; Svondo 30; naDecember 31.
Iyo rezinesi fizi yakaiswa seinotevera:
$ 750 - kana mari yakatenderwa isingadariki $ 50,000.00 uye zvikamu zvese zvekambani zvine kukosha kwepari;
Hurumende inowedzera chibairo mune chero eanotevera kesi, kana:
- Mvumo yemari iri pasi pemadhora zviuru makumi mashanu, asi zvimwe kana zvikamu zvese hazvina kukosha kwepara;
- Iyo kambani haina capital inobvumidzwa uye zvikamu zvese hazvina kukosha par
- Mari yaro inotenderwa inodarika $ 50,000.00;
Akanyoreswa Mumiriri Mari
Vakanyoreswa vamiririri muAnguilla vane yavo yakatarwa fizi yekushandisa iyo yakanyoreswa mumiriri wekambani uye nekupa yakanyoreswa hofisi.
Zvichienderana nemasevhisi akapihwa (madhairekitori / maofficial / vagovana), mubhadharo unogona kusiyana.
Mail Kutumira Mari
Izvo zvakare zvinokwanisika kukumbira mamwe masevhisi, senge kutumira tsamba, izvo zvinounza kumwezve pamwedzi kana pagore mari.
Iyo IBC inotadza kubhadhara muripo wegore nezuva rakatarwa ichaunza iyo 10% chirango pamubhadharo wehurumende. Saka, uko mari yehurumende iri $ 200.00, ino ichave $ 20.00.
Kana imwezve mwedzi mitatu ikapfuura, semuenzaniso muripo wacho waifanirwa kuitwa musi wa3 Chikumi, musi wa30 Chikunguru muripo we1% wakaitwa, asi musi wa10 Gunyana mari dzehurumende nechirango hazvisati zvabhadharwa, saka chirango mari ichawedzera kusvika ku30%. Iyo kambani ine mwedzi mitatu yekuita muripo uyu, usati warohwa.
Nekudaro, kuenderera nemuenzaniso, kana gore rekucherechedza kambani iri Chivabvu, mari yekuvandudza yegore rose inofanirwa nemusi wa30 Chikumi. Pa 1 Chikunguru chirango che10% chinowanikwa. Izvi zvinoshanda kusvika 30 Gunyana. Musi wa1 Gumiguru, kana mari yehurumende nechirango zvisati zvabhadharwa, chirango chichawedzera kusvika pa50%. Chirango ichi chinoshanda kusvika musi wa31 Zvita.
Makambani asina kubhadhara mari dzehurumende uye zvikwereti zvinotsanangurwa pamusoro apa, achabvisirwa gwaro nehurumende.
Mazuva akakodzera anotevera:
Quarter Mwedzi Zuva Rokupedzisira 10% Chirango Chakawanikwa 50% Chirango Chakawanikwa Chakabviswa
1st Jan - Mar Kurume 30 Kubvumbi 1 Chikunguru 1st Gumiguru
2nd Kubvumbi - Chikumi Chikumi Chikumi Chikunguru Chikunguru Chikunguru Chikunguru Ndira 30
3rd Chikunguru - Sep Gunyana 30 Gumiguru 1st Ndira 1 Kubvumbi 1
4 Gumiguru - Zvita Zvita 31 Ndira 1 Kubvumbi 1 Chikunguru 1
Kana iyo kambani ikadzoreredzwa mukati memwedzi mitanhatu kubva pazuva iro rakaraswa, mari yekudzorera yehurumende i $ 6.
Kana iyo kambani ikadzoreredzwa kupfuura mwedzi mitanhatu mushure mezuva iro rakaraswa, mari yekudzorera yeUS $ 6 inobhadharwa.
YeAnguilla iyo hurumende pamwe neyemumiririri mari inofanirwa kutarisirwa kunge ichitenderedza $ 750 pagore.
Mukupfupisa, huwandu hwakawanda hwemakambani hune gore rinovandudzwa hurumende uye mumiririri mari. Ibasa revaridzi, nhengo, maofficial, madhairekitori, mamaneja uye nevazhinji vanobatirana navo kuziva zvido zvekuvandudza kuitira kuti kambani irambe yakamira.